के तपाई बिहान उठ्नासाथ मोबाईल चलाउनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यी कुरामा ध्यान दिनुस् – Halkhabar kura
१३ पुष २०७६, आईतवार १०:०१
के तपाई बिहान उठ्नासाथ मोबाईल चलाउनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यी कुरामा ध्यान दिनुस्
काठमाडौं । अहिलेको समयमा मोबाइल फोन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। हरेक समय हामी फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। मोबाइलसँग यति जोडिएका छौं, राति सुत्नु अघिसम्म मोबाइल स्क्रिनमै हराउने हामी बिहान उठ्नासाथै फोन मात्र देख्छौं। ब्युँझने बित्तिकै फोन चलाउने हाम्रो बानी भइसकेको छ। तर अध्ययनहरुले यसरी बिहान उठ्नासाथ मोबाइल चलाउँदा विभिन्न प्रकारका असर निम्तन सक्ने देखाएका छन्।
विज्ञहरु बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन नचलाउन सुझाव दिन्छन्। तपाईं दिनको शुरुआत योग वा ध्यानबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले मन र मस्तिष्कमा शान्ति र ऊर्जा भर्छ र तपाईं आफ्नो दैनिक काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नुहुन्छ।-एजेन्सी
Previous बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकः सभामुख चयन बारे छलफल हुने
Next अनुहारमा चमक ल्याउन यी उपाय अप्नाउनुहोस्